China A Type Layer Chicken Cage စက်ရုံနှင့် ရောင်းချသူများ | မိုင်းတုံ
အလွှာပေါင်းစုံ ကြက်လှောင်အိမ် ဆိုသည်မှာ ၎င်းတို့တွင် လေးထပ် ဒီဇိုင်းရှိသည်။ ယခုအခါ ခြံအများအပြားတွင် ထိုကဲ့သို့သော ကြက်လှောင်အိမ်များကို အသုံးပြုကြပြီး မိသားစုတွင် ကြက်မွေးမြူရာတွင်လည်း တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြက်လှောင်အိမ်များကို အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ခွဲခြားထားသောကြောင့် ကြက်ကြီးများနှင့် မွေးမြူထားသော ကြက်နှစ်ကောင်စလုံးသည် ၎င်းတို့ကို လက်တွေ့အခြေအနေအရ ဒီဇိုင်းထုတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုသို့သော အလွှာပေါင်းစုံ ကြက်လှောင်အိမ်အား ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ အသုံးအများဆုံး ပစ္စည်းမှာ stainless steel ဖြစ်ပြီး၊ ထိုပစ္စည်းများမှာ စွမ်းဆောင်ရည် လက္ခဏာများ များစွာရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာ ၎င်းတို့သည် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ မာကျောမှုရှိသည်။ အလယ်အလတ်၊ ဤနည်းအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ပိုကြီးသော bearing စွမ်းရည်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသည့်အခါ ပုံပျက်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
1. ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားခြင်း - ကြက်သားထုတ်လုပ်မှုအတွက် ၎င်းတို့၏စွမ်းအင်ကို ထိန်းထားနိုင်သောကြောင့် ကြက်ဥထုတ်လုပ်မှုသည် ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။
2. ရောဂါကူးစက်မှု လျော့နည်းစေခြင်း – ကြက်များသည် ၎င်းတို့၏ မစင်များသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဆိုးရွားသော ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် မရှိပါ။
3. ဥကွဲအက်ခြင်းမှ ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည် – ကြက်များသည် ရိုးရိုးထွက်သော ဥများနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိပါ။
4. လုပ်သားအင်အားနည်းသည် - အလိုအလျောက်ရေလောင်းစနစ်နှင့် ရိုးရှင်းသော၊ လုပ်သားအင်အားနည်းသော အစာကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။
5. အလေအလွင့်နည်းခြင်း - တိရစ္ဆာန်အစာများတွင် အလေအလွင့်နည်းပြီး ကြက်တစ်ကောင်စာ အချိုးအစား သင့်လျော်သည်။
6. ကျုံ့ခြင်းနှင့် အမှိုက်ပုံခြင်း လျှော့ချခြင်း – ဘက်ထရီလှောင်အိမ်တွင် လယ်သမားသည် ၎င်း၏ကြက်ကို အချိန်မရွေး အလွယ်တကူ ရေတွက်နိုင်သည်။
7. သန့်စင်သောမြေဩဇာ – ဘက်ထရီလှောင်အိမ်အတွင်းရှိ အမှိုက်များကို ဖယ်ထုတ်ရန်မှာ ပိုမိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည့် နက်ရှိုင်းသောအမှိုက်သရိုက်များနှင့်မတူဘဲ ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အညစ်အကြေးစစ်စစ်ကိုလည်း ပရီမီယံဈေးဖြင့် ရောင်းချပါသည်။
ယခင်- Hot Galvanized Wire Mesh H-Type Layer Cage
နောက်တစ်ခု: အလိုအလျောက် H အမျိုးအစား ကလေးကြက်လှောင်အိမ်